Fa maninona no meloka ihany koa ny vondrona Lufthansa amin'ny fianjerana Okrainiana any Iran?
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fa maninona no meloka ihany koa ny vondrona Lufthansa amin'ny fianjerana Okrainiana any Iran?
Janoary 11, 2020
Tompon'antoka tamin'ny fianjeran'ny Airlines International Ukraine ihany koa Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Qatar Airways, ary Aeroflot ho an'ireo antoko tompon'andraikitra amin'ny Ukraine International Airlines voina any Iran? Mety hisy ny firaisana tsikombakomba sy didim-pitsarana tsy ampoizina momba izay tompon'andraikitra amin'ny fianjerana Sidina PF752?
"Ilay kinova avy any Iran: "Tao anatin'ireo fepetra saropady sy sarotra toy izany, ny sidina Okrainiana fiaramanidina 752 dia niainga avy tao amin'ny seranam-piaramanidina Imam Khomeini ary rehefa nihodina dia napetraka tanteraka tamin'ny toerana hanatonana foibe miaramila saro-pady tao amin'ny haavo sy ny làlan'ny lasibatry ny fahavalo. Tsy maintsy noeritreretin'izy ireo fa ny fiaramanidina amin'ny radar-ny, ny sidina PS752 dia fiaramanidina an'habakabaka vahiny saika hanapoaka. ”
Minitra iray taty aoriana dia mpandeha fiaramanidina tsy manan-tsiny 176 an'ny fiaramanidina mpanao raharaham-barotra no namoy ny ainy.
Izany dia mihoatra ny mampalahelo fotsiny, fa misy bebe kokoa ve ny tantara.
Mazava ho azy, tokony nanakatona avy hatrany ny habakabak'izy ireo tamin'ny sidina sivily sivily i Iran. Nisy ny antony nanambaran'ny Fahefana Avaratra Federaly any Etazonia (FAA) fa faritra tsy misy fiaramanidina i Iran.
Tsy niraharaha ny fampitandremana amerikana i Ukraine International Airlines ary nanapa-kevitra ny hampiasa ny sidina mandritra ny fifandonana mitam-piadiana eo amin'ny Etazonia sy Iran.
Hatreto dia mbola tsy nisy fanazavana na fifonana naheno na iza na iza avy any amin'ny Okraina International Airlines. Fa maninona no avelan'ny fiaramanidina Okrainiana hiainga ny sidina ataon'izy ireo?
Niainga avy any Teheran ny sidina iraisampirenena taorian'ny fanafihana balafomanga iraniana tany Etazonia tamin'ny 7 janoary lasa teo ary valiny no antenaina ary mailo ny rehetra amin'ny 8 Janoary
Ny Turkish Airlines TK 875 tamin'ny 08 Janoary dia niainga tamin'ny 3.35 maraina nankany Istanbul
Austrian Airlines OS 872 amin'ny 08 Janoary t00k miala amin'ny 3.45 maraina mankany Viena
Lufthansa LH 601 tamin'ny 08 Janoary dia niainga tamin'ny 4.23 maraina nankany Frankfurt
Aeroflot SU431 tamin'ny 08 Janoary dia niainga tamin'ny 4.31 maraina tany Moskoa
Qatar Airways QR 491 tamin'ny 08 Janoary dia niainga tamin'ny 5.01 maraina ho any Doha
Ny Turkish Airlines TK 873 tamin'ny 08 Janoary dia niainga tamin'ny 5.07 maraina nankany Istanbul
Niainga tamin'ny 752 maraina ny sidina iraisam-pirenena PF08 Okrainiana tamin'ny 6.12 Janoary ary maty voatifitra
Ny zotram-piaramanidina Turkish Airlines TK879 tamin'ny 08 Janoary dia niainga tamin'ny 8.23 ​​maraina nankany Istanbul
Qatar Airways QR483 tamin'ny 08 Janoary dia niainga tamin'ny 12.50 hariva nankany Doha
Ny Turkish Airlines TK871 tamin'ny 08 Janoary dia niainga tamin'ny 3.29 hariva nankany Istanbul
Qatar Airways QR 499 tamin'ny 08 Janoary dia niainga tamin'ny 11.08 alina tany Doha
Qatar Airways sy Aeroflot dia nanohy nanidina tsy nisy fanelingelenana.
Nofoanan'ny Turkish Airlines ny sidina rehetra tamin'ny 9 Janoary
Nanidina hatrany ny Austrian Airlines tamin'ny 9 Janoary fa nofoanana avokoa ny sidina nanomboka ny 10 Janoary hatramin'ny 20 Janoary
Lufthansa dia niainga tamin'ny faha-8 ary nofoanana ny sidina rehetra hatramin'ny 20 Janoary
Ka iza no meloka amin'ity teti-dratsy ity mamono olona 176?
1) Meloka ny governemanta Iran ny famelana ny seranam-piaramanidina hiasa mandritra ny fifandonana. Meloka noho ny fanafihana ny toby amerikana i Iran. Meloka i Iran noho ny nitifirany ilay fiaramanidina nefa tsy azony antoka fa fiaramanidina miaramila fahavalo izy io.
2) Meloka ny fiaramanidina iraisam-pirenena Okrainiana amin'ny alàlan'ny famelana ny fiaramanidiny handao an'i Teheran mandritra ny fiatoana mitam-piadiana.
3) Qatar Airways sy Aeroflot dia melokay amin'ny alàlan'ny sidina miasa mandritra ny fifandonana mitam-piadiana ary toa tsy mitandrina izy ireo amin'ny sidina miditra sy mivoaka an'i Teheran tsy misy fahatapahana mialoha sy aorian'ny fianjerana.
4) Meloka ny Austrian Airlinesy amin'ny alàlan'ny sidina miasa mandritra ny fifandonana mitam-piadiana, amin'ny faritra izay nambaran'ny FAA ho faritra tsy misy fiaramanidina. Austrian Airlines dia manao tsirambina amin'ny fanohizana ny asa na dia iray andro aorian'ny fianjerana.
5) Meloka ny Turkish Airlines amin'ny fandraisana sidina mampidi-doza be amin'ny zotram-piadiana amin'ny 8 Janoary ary ho an'ny asa mitohy ny tontolo andro ny 8 Janoary. Nofoanan'ny Tiorka ny sidina rehetra tamin'ny 9 Janoary fa nanomboka ny asany ara-dalàna ny 10 Janoary.
5) Meluf i Lufthansa maka risika fantatra amin'ny fiaingana mandritra ny fifandonana mitam-piadiana na dia teo aza ny FAA nanambara fa faritra tsy misy fiaramanidina i Iran. Ilay mpitatitra alemanina dia nandalo ny torolàlana FAA tamim-pahalalana.
Nilaza ny mpitondra tenin'i Lufthansa eTurboNews, ny fangatahana FAA dia tsy mihatra amin'ny mpitatitra, satria i Lufthansa dia tsy hanaiky tapakila ao amin'ny Star Alliance Partner United Airlines hampiasaina amin'ny sidina mankany Iran.
Nasongadiny ihany koa ny sidina Lufthansa 600 mankany Teheran dia nasaina niverina tany Frankfurt.
Na izany aza, ny sidina Lufthansa LH601 dia nandao an'i Teheran ho any Frankfurt. Toa nahalala sy nahatakatra ny loza mety hitranga i Lufthansa. Na izany aza, najanon'i Lufthansa ny sidina Iran taorian'ny nialany tamin'ny Repoblika Islamika tamin'ny 8 Janoary hatramin'ny 20 Janoary.
6) Mety hiteny i Iran hoe: meloka i Etazonia ny fanombohana ny fiakaran'ny famonoana ny Jeneraly Iraniana ao Iràka ary ny fihantsiana fihetsiketsehana feno fankahalana antenaina avy any Iran. Na izany aza, rehefa tonga ny fianjeran'ilay fiaramanidina dia nanambara i Etazonia fa faritra tsy misy sidina i Iran noho ny antony iray.
Ny LH, OS, TK, QR, SU Airlines any Teheran dia tokony ho ohatra tsara ary tompon'andraikitra amin'ny fitiavam-bola amin'ny orinasa manafoana ny sidina ny 8 janoary. Mety hisy ny fieritreretana toy izany aorian'i Ukraine International Airlines amin'ny fanafoanana ihany koa. ny fandosiran'izy ireo ho any Kyiv.
Vokatr'izany, ny resy indrindra tamin'ny ady nifanaovan'i Etazonia sy i Etazonia Iran izao dia ny ain'ny olombelona tsy manan-tsiny ankehitriny. Novonoina tao anaty stampede izy ireo ary novonoina tao amin'ny Okrainiana Iraisam-pirenena B737 fianjerana.
Mangataka onitra amin'i Iran i Okraina.
Toa tsy misy dikany intsony ny fiainana!
Mampalahelo fa tsy vao sambany no nisy olona an-jatony maro maty voatifitra.
Ny sidina Malaysia Airlines Flight 17 dia sidina mpandeha voatondro avy any Amsterdam mankany Kuala Lumpur izay notifirina tamin'ny 17 Jolay 2014 teo am-panidinana ny faritra atsinanan'i Okraina. Maty avokoa ny mpandeha 283 sy ny ekipa 15.
Ny sidina Koreana Air Lines 007 dia sidina iray voatondro avy any New York City mankany Seoul amin'ny alàlan'ny Anchorage, Alaska. Tamin'ny 1 septambra 1983, ny zotram-piaramanidina Koreana Tatsimo nanompo ny sidina dia notifirin'ny mpanelanelana Sovietika Su-15 namono ny olona rehetra tao amin'ny B747
Lufthansa dia tsy nanana zavatra betsaka holazaina momba ireo 176 novonoina, saingy namoaka izao fanambarana izao: Due amin'ny toe-draharaha tsy mazava momba ny habakabaka manodidina ny seranam-piaramanidin'i Tehran, ny zotram-piaramanidina Lufthansa Group dia manafoana ny sidina avy any / mankany Tehran hatramin'ny 20 Janoary ho toy ny fepetra fisorohana. Miaraka amin'ireo manampahefana nasionaly sy iraisam-pirenena, ny vondrona Lufthansa Group Security dia manohy manombatombana ny toe-java-misy amin'ny fandriam-pahalemana ho an'ireo tonga sy fiaingana ho an'ny seranam-piaramanidina Tehran sy ny habakabaka Iraniana iray manontolo. Raha vantany vao manana fampahalalana amin'ny antsipiriany izahay, dia hanapa-kevitra raha toa ka rahoviana no afaka miasa ny sidina Iraniana. Manenina izahay noho ny fahasahiranan'ireo mpandeha.
Ny didim-pitsarana meloka dia maneho ny hevitry ny mpanoratra
Notifirinay ny fiaramanidina mpandeha fa tsy izany
Horohoron-tany iray nandrava indray no namely an'i Puerto Rico